အာဖရိကတိုက်အားဘာလင်ကွန်ဖရင့်၌ဥရောပသားများကမျှဝေခြင်း - Afrikhepri Fondation
Lသူသည်ဘာလင်ကွန်ဖရင့်ကို ၁၈၈၄ နိုဝင်ဘာလမှ ၁၈၈၅ ဖေဖော်ဝါရီအထိကျင်းပခဲ့ပြီးအာဖရိကကိုလိုနီကိုအုပ်ချုပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုတည်ထောင်ရန်အတွက်အဓိပတိဘစ်စမတ်ကစီစဉ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ပေါ်တူဂီ၊ အီတလီလူမျိုးတို့သည်အာဖရိကအတွင်းပိုင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၅ နှစ်မပြည့်မီဥရောပ၌မျှဝေခဲ့ကြသောအာဖရိကနိုင်ငံများအားစစ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သောစစ်ပွဲများကြောင့် ...
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစကားများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမှုကြောင့်အာဖရိက၏ကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုကိုကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံများကအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုကိုအင်အားဖြင့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဘာသာတရားအသစ်တစ်ခုချမှတ်ခြင်း၊ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုချမှတ်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအသစ်တစ်ခုပြဌာန်းခြင်း။ ထိုသို့ပြုပါစေ။
၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင်အာဖရိက၏ကမာမဖြစ်တည်မှု (ကမာ) မတိုင်မီကဤတိုက်ကြီးရှိလူ ဦး ရေသည်သယံဇာတများဖြင့်နေထိုင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏သဘာဝနယ်နိမိတ်သည်ဤနိုင်ငံများဖွဲ့စည်းသောလူမျိုးစုများကသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုလိုနီနယ်မြေများမှအလိုရှိသည့်နယ်နိမိတ်များကိုအတိအကျသတ်မှတ်ထားသောအာဖရိကနိုင်ငံများသည်လုံးဝလွတ်လပ်ပြီးအရေးမကြီးသောကြောင့်လူ ဦး ရေ၏တည်ကြည်မှုနှင့်ဒေသများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
အများဆုံးတိုင်းရင်းသားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်မိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအလေးသာမှာမကြာခဏစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာစိတ်ပျက်နေထိုင်, ပိုင်းခြားရှာပါ။ အဆိုပါရလဒ်အာဖရိက၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အပြည့်အဝသေးကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အကြီးမားဆုံးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာ၏သောတိုက်ကြီးအလျှော့, ပဋိပက္ခများနှင့် ပို. ပို. ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလူမှုရေးမတည်ငြိမ်မှုများတိုးအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အာဖရိကသားတွေကကျိန်စာလား။ မဟုတ်ပါ၊ အာဖရိကသားများသည်ကျိန်စာသင့်ခြင်းမခံရပါ။
သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့တိုက်ကြီးလိုပြိုကွဲပျက်စီးသွားတယ်။ ၎င်းကိုမသိဘဲသူတို့သည်သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာ၊ သူတို့၏ဖြစ်တည်မှု၏အဓိကအချက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အာဖရိကလွတ်လပ်ရေး၏သမိုင်းသည်လွတ်လပ်သောကျွန်၏ပုံဆောင်ချက်နှင့်ဆင်တူသည်။ ချည်နှောင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့်သူသည်မမြင်နိုင်သောလှောင်အိမ်ထဲတွင်အကျဉ်းကျနေတုန်းသူ့ကိုယ်သူလွတ်မြောက်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေရန်အတွက်အာဖရိကသည်သူ၏သမိုင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရန်လိုသည်။ လူမည်း (ကမာရီး) တစ်ချိန်တည်းမှာသူသည်သိပ္ပံပညာကိုလေ့လာနေသူဖြစ်သောကြောင့် (ဘုရားသခင်ကဲ့သို့) လေးစားမှု၊ အသိပညာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ။ အာဖရိက၏အစစ်အမှန်ပိတ်ဆို့မှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါ (၁၈၈၄ မှ ၁၈၈၅ တွင် balkanization) မဟုတ်ဘဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သတိလစ်ခြင်း) ဖြစ်သောကြောင့်မိမိနှင့်ပinိပက္ခဖြစ်နေသောလူသည်မိမိဖြစ်တည်မှု၏အလုံးစုံလွတ်မြောက်မှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အာဖရိက, 1880-1914 ၏ partition ကို
6 50,99 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 50,99 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 27, 2021 6:46 pm တွင် updated
Yopougon မှ Aya ကိုကြည့်ပါ (၂၀၁၃)
စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထား - သင်လက်လျှော့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ (အသံ)
ငွေနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ - စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမည်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်သနည်း (အသံ)
Feng Shui နှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း (ဗီဒီယို)